Moments leh saaxiibo 20
Xayawaanka miyuu leeyahay oo miyuu qabaa?
Xayawaanka qaarkood waxay muujiyaan karti la yaab leh si ay u fahmaan waxa iyaga lagu sheegay iyo waxay samayn doonaan waxa loo sheegay sida haddii ay fahmaan. Xayawaanku ma'aha maskax ahaan sida bani'aadamku u fahmayo ereyga, mana u malaynayaan, inkasta oo ay u muuqdaan inay fahmayaan waxyaabo badan oo loo sheegay iyaga oo samayn doona waxyaabo badan oo loo sheegay inay sameeyaan. Mind waa mabda 'shakhsi ahaaneed ee qofka oo keenaya isaga oo u suurtageliya inuu isaga ka fekero sida aniga oo ah. Xayawaanku ma aha mabda 'mabda' waxna kuma jiraan ficilladooda ama dabeecadooda waxay soo jeedinayaan inay heystaan. Mana fikiraan, ma fekeri karaan sababtoo ah fikirku waa suurtagal oo keliya marka ay maskaxda ku jirto rabitaan. Xayawaanku waxay jecel yihiin mabaadi'dooda iyo dhaq-dhaqaaqa, laakiin ma laha fikrado sida hayadaha xayawaanka aadanaha.
In dareen ka duwan halkii aadanaha, xayawaanka maanka. Dareenka ku saabsan xayawaanka laga yaabo in la yiraahdo maanka lagu hayo waa in uu ka shaqeeyo dareenka maskaxda caalamiga ah, iyada oo aan loo marin mabda'a shakhsi ahaaneed. Xayawaan kasta, oo aan si deg-deg ah hoos ugu dhicin nin, wuxuu u dhaqmaa sida dabiiciga ah. Xayawaanku wax kama qaban karo dabeecaddiisa, taas oo ah xayawaanka dabiiciga ah. Ninka wuxuu u dhaqmi karaa si waafaqsan dabeecadiisa xayawaanka si adag, ama sida uu qabo dareenka aadanaha caadiga ah iyo caadooyinka bulshada ama ganacsiga, ama wuxuu ka gudbin karaa xayawaanka iyo bini-aadanka caadiga ah isla markaana u dhaqmayaan si siman iyo sida Ilaah. Doorashadan oo ah ficilkiisa uu qofku leeyahay, waa suurtagal sababtoo ah wuxuu leeyahay maskax ama maskax ahaan. Haddii xayawaanku haysto ama uu ahaa maskaxiyan waxaa suurtogal ah in qaar ka mid ah doorashooyinkaas lagu ogaado ficilka. Laakiin xayawaanku marnaba wax kama qaban karo noocyada kala duwan ee noocyada ay ka mid tahay, iyo tayada ay go'aamiso nooca xayawaanka iyo ficilka. Tani waxay khusaysaa xayawaanka ku sugan xaaladeeda dabiiciga ah iyo xaaladeeda iyo xaaladeeda iyo marka aan la faragelin ama aan soo galin saameyn degdeg ah ee nin. Marka qofku keeno xayawaan uu hoos yimaado wuxuu u beddelaa xayawaan ilaa inta uu saameyn ku yeelanayo saameyntiisa. Ninku wuxuu awood u leeyahay in uu saameyn ku yeesho maskaxdiisa xayawaanka si isku mid ah taas oo uu ku hayo saameynta maskaxda ee xayawaanka isaga qudhiisa. Desire waa mabda'a xayawaanka, maskaxda ku hayso mabda'a asaasiga ah ee nin. Desire waa baabuurka maskaxda. Desire waa arrin maskaxda ku shaqeysa. Sababta ah in xayawaannada loo tababaran karo inay adeecaan amarrada dadka ayaa ah sababtoo ah mabda 'rabitaanku waxay ka jawaabi doonaan ficilka maskaxda oo addeeca xukunkiisa marka maskaxdu sii socoto dadaalkeeda ku aaddan xayawaanka. Xayawaanku haddaba sidaas ma samayn fekerka marka la fulinayo amarada nin. Xayawaanku si toos ah ayuu u dhaqmaa fikradda maskaxda ee u hoggaysa. Tusaale ahaan waxaa laga yaabaa in la sheego in aan xayawaanka la ogeyn in uu fahmo oo uu adeeco amar ka duwan amarrada kale ka hor inta aan la siin. Wax kasta oo ay sameeyaan waxay la mid tahay nooca waxa lagu baray nin inuu sameeyo. Dabeecadda maskaxdu waa inuu qorsheeyo, isbarbardhigo, inuu ka soo jeedo. Xayawaanku ma laha awooda ama awoodda si ay u qorsheyso wax, si loo barbardhigo doodda, ama inuu ka soo bilaabo hanaan ficil naftiisa ama xayawaan kale. Xayawaanku waxay sameeyaan tabaha ama amar addeecaan sababtoo ah waa la baray oo loo tababbaray inay fuliyaan oo adeecaan, taasina waxay sabab u tahay maskaxda qofka inuu ku tuuro rabitaanka xayawaanka kaas oo ka tarjumaya fikirkiisa.
Saameyn xun ma la keeni karaa bani-aadamka iyada oo joogitaanka xoolaha xayawaanka ah?
Taasi waxay ku xiran tahay in bini'aadanku ka badan tahay sida xayawaanku ku sameeyo. Mid kastaa wuu caawin karaa kan kale, laakiin sida caawimaadda loo heli karo ama waxyeello loo geysan karo waa in uu go'aan ka gaaro bini-aadanka. Xayawaanku wuxuu ka caawiyaa jaaliyada oo leh nin haddii qofku baro oo xakameeyo xayawaankiisa. Xayawaanka ku yaal duurjoogta iyo dalkiisa hooyo uma baahna gargaar bani'aadamnimo, laakiin marka uu tarbiyada iyo taranka xoolaha u keeno xayawaankiisa, xayawaanku mar dambe ma awoodi karo ama uu fursad u heli karo inuu u cuno cuntadiisa naftiisa iyo dhallinyaro . Dabadeedna ninka ayaa masuul ka ah xayawaanka; oo masuuliyad ka saaran tahay waa waajib inuu qofku daryeelo oo ilaaliyo xayawaanka. Dadku sidan ma aha sababtoo ah wuxuu rabaa kor u qaadista iyo waxbarashada xayawaanka, laakiin maxaa yeelay wuxuu rabaa inuu xayawaankiisa u isticmaalo. Sidaan sidaannu u helnay xayawaanka noocan oo kale ah sida faras, lo'da, idaha, ariga, eyga iyo shimbiraha. Hay'adaha ka shaqeeya meydadka xayawaanka waxaa loo bartaa isticmaalka qaar iyaga oo la socda hay'adaha xoolaha u diyaargaroobaya si ay u dhaqaajiyaan jirka bani'aadamnimada mustaqbalka mustaqbalka ama adduunka. Sidaa daraadeed waxaa jira isbeddel u dhexeeya xayawaanka, iyo nin. Xayawaanku wuxuu wax baray nin si ay u bixiyaan adeegyadaa ay dadka u keento. Mabda'a rabitaanka ee xayawaanku wuxuu ku dhaqmaa maskaxda qofka, iyo tallaabooyinka joogtada ah iyo falcelinta mabda'a rabitaan ee xayawaanku wuxuu diyaariyaa mabda'a aadanaha ee maskaxda qofka, sidaas awgeed muddo dheer oo fog xayawaanka waxaa loo soo gudbin karaa dawlad u oggolaanaysa in ay isla markiiba toosiso isla markaasna maskaxda ku hayso. Ninka wuxuu fulin doonaa waajibaadkiisa si ka wanaagsan haddii uu u guto waajibaadkiisa caqli ahaaneed oo si daacadnimo leh halkii uu ku noqon lahaa xaalad adag oo qallafsan. Dadku waxay ka caawin doonaan xayawaanka haddii uu iyaga u tixgeliyo iftiinka kaliya ee lagu soo bandhigay wuxuuna si naxariis leh ula dhaqmi doonaa oo tixgelin doonaa wuxuuna muujin doonaa jacayl; waxay markaas ka jawaabi lahaayeen rabitaankiisa hab ku qosli lahaa. Si kasta oo ay u muujiyaan inay jeclaanayaan, si kastaba ha ahaatee, waa in la daryeelo. Jacaylkaasi waa inuusan noqon mid ka mid ah nacas iyo nacasnimo, laakiin jacaylka uu qofku dareemayo nafta oo dhan xayawaanka nool. Haddii qofku sidan samayn lahaa, wuxuu horumarin lahaa xayawaanka oo waxay u jawaabi lahaayeen si haboon oo u keeni kara ninkan inuu si fiican u fekero in xayawaanka ay sirdoonku u haystaan ​​macnaha ay leedahay macalinka sababaynta. Laakiin xitaa markaa, haddii xayawaanka u muuqday in ay u dhaqmaan si ka wanaagsan oo ka badan kuwa ugu wanaagsan ee la joogo waqtigooda weli ma lahaan lahaa awoodda fekerka ama fakarka sababaynta.
Xiriirka u dhexeeya bini'aadamka iyo xayawaanku waa xumaan iyo xayawaan marka xayawaanka laga soo saaro ciriirigooda iyadoo ay ujeeddo bani-aadmi ah oo sameysey si loo buuxiyo meel aan lahayn xayawaan, aadane iyo ilaah. Tani waxaa sameeya rag ama dumar isku dayaya in ay sanam ka sameystaan ​​xayawaan xayawaan ah. Sida caadiga ah eeyga ama bisad ayaa loo doortaa ujeedadaas. Xayawaanka waxaa loo sameeyey shey lagu magacaabo ama cibaadaysi. Qofka saboolka ahi wuxuu ka yimaadaa wadnaha qalafsan oo leh erayo qarsoodi ah oo ku saabsan sheyga ay u heellan yihiin. Sanamida xayawaanka rabaayada ah waxaa loo qaaday xayawaankaas sida xayawaanka xayawaanka ah ee loogu talagalay sharraxa ugu dambeeyay ama khaas ah oo loo sameeyay in lagu xidho silsilado dahab ah ama qurxiyo kale, iyo inay si gaar ah uhaystaan ​​shaqaaluhu inay nadiifiyaan nadiifinta iyo quudinta. Mid ka mid ah kiis waxa ay la socdeen eeyga ama u kaxeeysteen gaari gaar ah oo laga yaabo inuu leeyahay hawo nadiif ah oo aan la daalin. Xayawaankani waxa uu ahaa sidii loo sii waday noloshiisii ​​oo markii dhimashadu timid waxaa lagu dhejiyey rash faahfaahsan; Munaasabada ayaa lagu qabtay iyada oo ay raaceen cibaadeeyayaasheeda iyo asxaabteeda in ay qabaan xabaalo si gaar ah loogu diyaariyey, halkaasoo lagu hayo meelo qurxoon oo lagu qurxiyo oo lagu dhajiyo si loogu xuso dhacdada murugada leh. Xayawaanka looma ciqaabayo sida tan; Dhammaanba eedaha waa in lagu xiro aadanaha. Laakiin xayawaanku waa uu ku dhaawacmay ficilladan oo kale sababtoo ah waxaa laga soo qaadaa dabiiciga dabiiciga ah isla markaasna la galiyaa meel aan ka tirsanayn. Ka dibna ma bannaana in dib loo soo galo cirifka kaas oo la qaaday oo aan awoodin in uu u dhaqmo si dabiici ah, faa'iido leh oo ku haboon booska ay siisay dadka aan caadiga ahayn. Tallaabadan waa xad-gudub ku ah fursadda booska bini-aadanka, kuwaas oo ka lumi doona xuquuqda iyo sheegashada xadgudubyada noocaas oo kale ah noloshii mustaqbalka. Fursadaha la lumiyey ee booska, qashinka lacagta, khalkhalka bini'aadamka kale ee ku qasbay in ay noqdaan addoommo xayawaan ah, iyo in ayan xayirnayn xayawaanka meesha la siiyay, dhammaantood waa in la siiyaa mushkilad, niyadjab iyo Dhibaatooyinka noloshooda mustaqbalka. Waxaa jira ciqaabo yar oo aad u daran oo loogu talagalay bini-aadanka oo sameeya sanam xayawaan ah iyo cibaadooyin xayawaan ah. Tallaabadani waa isku day inaad ku dhisto god ilme ah oo addoon ah, iyo isku daygaasi waa inuu helaa lamadegaanka keliya.
Xaaladaha qaarkood xaaladaha qaarkood saamaynta xayawaanku aad ayay u xun yihiin dadka qaarkood. Tusaale ahaan, marka qofku uu daciif yahay ama hurudo bisad ama eey jir waa in aan loo oggolaan in uu taabto jirka, sababtoo ah marka jirku uusan joogin maskaxdiisa ama maskaxdu maaha miyir la'aanta jidhka bini'aadamka, ee jirka bini-aadamka waxaa laga saari doonaa eeyga ama bisad ama xayawaan kale oo taabanaya. Xayawaanku wuxuu u egyahay meel u dhow ama taabanaya jirka bani'aadamka sababtoo ah waxa uu ka helayaa wanaaggiisa. Caddaynta tani waa in eyga, eyga duqa ah gaar ahaan, mar walba xoojin doonaan jirka jirka ah. Tani wuxuu ujeedaa ujeeddo labadaba; si loo xoqdo, laakiin gaar ahaan sababtoo ah wuxuu helayaa saameyn magnet ah oo ka timaadda jidhka bini'aadamka kaas oo uu u qalmo. Waxaa laga yaabaa in badanaa la ogaado in bisad ay dooran doonto qof u jiifa qofkana jiifa, xitaa wuxuu ku foorari karaa laabtiisa iyo inuu si fudud u jilicsan yahay sida uu u nuugo jimicsiga qofka hurda. Haddii tani habeeynayso habeenkii habeenkii, qofka ayaa noqon doona mid daciif ah oo daciif ah ilaa xitaa dhimasho laga yaabo inuu keeno. Sababta oo ah xayawaanku waxaa laga yaabaa in ay ka soo jiidanayaan magnetismka nin, taasi ma aha inay sababto nin in uu diido xayawaan ama uu ku dhaco, laakiin waa inuu u adeegsadaa xukunkiisa inuu la tacaalo xayawaanka, u muujiyo raxmadda iyo jacaylka uu qofku u dareemayo dhammaan noloshooda xayawaanka; laakiin waa inuu sidoo kale ku tababaraa anshaxa edbinta, kaas oo iyaga wax u baraya waxqabadyo faa'iido leh oo mug leh, halkii ay u oggolaan lahaayeen inay sameeyaan sida ay u jecelyihiin, sababtoo ah wuxuu yahay mid caajis ah ama taxaddar leh si uu u tababaro ama uu muujiyo nacas iyo daacadnimo Dulmigooda ah ee Dareenkooda.